Klopp: Liverpool - KU SII DHAQAN
ACCUEIL » SPORTS Klopp: Liverpool
Jurgen Klopp ayaa aamusiyay sagaal dhibcood ka danbeeya Liverpool oo ka hooseysa kooxda Manchester City ka dib guul laga bilaabo 3-1 illaa Anfield isagoo ku dhawaaqaya "waxaan dooneynaa inaan ugu horreyno bisha May oo aan ahayn kaliya bisha Nofeembar", iyadoo intaas ku dartay farqiga u muuqday inuu "waalan yahay" isaga.
Hogaamiyaasha Horyaalka ayaa si geesinimo leh uga horyimid kooxdii Pep Guardiola ee Anfield, iyadoo goolal laga dhaliyay Fabinho Mohamed Salah et Sadio Mane . ] samaynta dadaalkii ugu dambeeyay ee Bernardo Silva dhiirrigelinta booqdayaasha.
Klopp ayaa ku adkeystay in 'daanyeerkiisa maskaxeed' uusan dareemin cadaadiska ah inuu sugo kulanka ugu sarreeya Premier League, sidoo kalena aysan wax badan ka aqrinin fadhigooda raaxada ee City.
"Ma dareemayn cadaadiska, inaan daacad ka ahaano 100%," ayuu yiri Klopp. Aaway cadaadiska? Fiiri, arrimuhu hadda way dhici doonaan, waanu garanaynaa, haddii aad nala joogtana waxaad dhahdaa, "Wow, sagaal qodob. Weli waxaa jira jid dheer oo loo maro in hal dhibic laga gaadho halkan, dhibic lumiso iyo wixii la mid ah, oo ay u badan tahay inay dhici doonaan. 100% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in hada wixii ka dambeeya, Liverpool ay waayi karto kaliya, laakiin ay tahay qaab aad u xun. 19659002] "Waad u arki kartaa sidan oo kale, laakiin dan kama lihin. Waxaan kuu balan qaadayaa inaanaan danaynayn. Waxaan hada si buuxda diirada u saarney ciyaartan mana saarneyn xaalada guddiga ama tirada dhibco ee aan ku heysano City. Waa waalan tahay. Sagaal qodob, ma qiyaasi kartid wax sidan oo kale ah oo dhacaya, laakiin ma ahan wax muhiim ah maxaa yeelay yaa doonaya inuu ugu horreeyo horraanta Noofembar?
“Waxaan dooneynaa inaan ugu horreyno bisha May mana ahan oo keliya November. Dhamaanteen waan wada ognahay, laakiin maahan inaan dhahno taas sababta oo ah way cadahay, waxaan isku deyeynaa waxaan awoodno ugu dambeyntiina waan arki doonnaa waxa dhaca. Cadaadiska ama waxkastoo aan wali jirin. Waxaa laga yaabaa inay timaaddo ama wax timaaddo, laakiin xilligan la joogo waa fursad, horay u soco, samee shaqada, waxaad dhigtaa wax kasta oo aad haysatid oo arag waxa dhaca. "
Klopp wuxuu la yaabay goolasha ay dhalisay kooxdiisu, gaar ahaan goolkii labaad ee uu dhaliyay Salah, oo ay ku abuurtay gaarsiisyo heer caalami ah Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson .
“Goolka labaad ee aan dhalanay, uma maleynayo inaan weligiis arkay gool noocaas ah,” ayuu yiri macallinka Reds. Malaha maya. Difaaca midig oo leh dhinac yar oo xarig ah oo 60 bidix ah; laba furayaal dheeri ah iyo xarun ku taal xargaha 40 yaard, madax. Waa wax gaar ah.
Waxay ahayd waqti fiican in la dhaliyo gool sidan oo kale ah. Yoolka saddexaadna aad ayuu ufiican yahay, xarun xasaasi ah iyo Sadio oo ku habboon booska saxda ah. Waxay ahayd wax fiican, oo seddexdaas ujeeddadood, waxay ahayd shaqada ugu adag. Wiilashu waxay u qalmeen saddexdaas qodob. Great. "
Klopp wuxuu waqti la qaatay ciyaarta kadib Sean Cox, kaasoo ku soo laabtay Anfield markii ugu horeysay ka dib markii uu soo gaadhay dhaawac culus oo maskaxda soo gaadhay intii lagu jiray weerarkii taageerayaasha Roma ee dhulka ka dhacay bishii Abril 2018.  "Waxaan hadda ku arkay isaga ka hor wareysiyada. Way fiicneyd, way fiicnayd, aad bay u fiicnayd, ayuu yidhi. Aad ayuu ugu faraxsanaa inuu i arko, laakiin waxaan u maleynayay inaan aad ugu faraxsanahay inaan arko, marka waxaan u maleynayaa inaan barbaro qabnay!
Xaaskiisa iyo wiilkiisuba halkaasay joogeen, marka waxay u ahayd maalin cajiib ah iyaga. Taasi waa sax sida aan dooneynay. Horaan u dhihi karaa, markii uu doonayo inuu yimaado, wuu u dhaqaaqi karaa Liverpool oo wuxuu heli karaa tikidhada xilliyeed. 100
Wiilasha oo dhami, waxay ahayd war aad u muhiim ah markii aan baranay inuu awoodo inuu aado garoonka oo uu xaadiro ciyaar kubada cagta ah. Waan arkay isaga maanta, haa, wuu ku raaxeysan karaa ciyaarta, markaa wax walbana waa hagaagsan yihiin. "
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/liverpool-engliverpool/story/3987135/liverpools-nine-point-gap-over-rivals-manchester-city-is-crazy-jurgen-klopp
Kabtanka Eintracht Frankfurt David Abraham ayaa hogaaminaya maamulka Friborg qaabkii WWE (VIDEO)